Nabil Bank Limited(Nabil Bank Limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
-अर्जुन तिमिल्सिना काठमाण्डौ । नेपालको सेयरबजारमा यो साता उछालको अवस्था देखियो । सातामा ५ पाँच दिन कारोबार भयो । जसमा ४ दिन बजार बढ्यो भने १ दिन सामान्य करेक्सन आयो । साताभरमा बजार १६५ अंकको बढोत्तरी आएको छ । साताभरमा ३५ अर्ब ३१ करोड बरबरको करोबार भयो । जुन अघिल्लो साताको तुलनामा धेरै राम्रो कारोबार भएको हो । यो कारोबार अघिल्लो साता २१...
काठमाण्डौ । काठमाडौंको चावहिलमा अवस्थित ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि र नबिल बैंक लिमिटेडबीच सहुलियत दरमा उपचार सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । नबिल बैंकको प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रममा बैंकका ग्राहक, कर्मचारी तथा परिवारजनलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा सो सम्झौता भएको हो...
कृषि कर्जा मेला तथा कृषि लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम आयोजनामा नबिल बैंकको सहकार्य
काठमाण्डौ । नबिल बैंकले नेपालमै पहिलोपटक आयोजना हुन गइरहेको ‘कृषि कर्जा मेला’ तथा ‘कृषि लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ मा सहकार्य गर्न आर एन्ड डी. इनोभेटिभ सोलुसन्स प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघद्वारा आउँदो माघ ५ देखि ८ गतेसम्म चितवन एक्स्पो सेन्टर नारायणगढमा आयोजना हुन गइरहेको पाँचौँ राष्ट्रिय...
सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा नबिल दिगो बैंकिङअन्तर्गत उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौ । नबिल बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका विभिन्न गाउँपालिकामा उद्यमशीलता विकास तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। बझाङ जिल्लाको बित्थडचिर गाउँपालिका र डडेल्धुरा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकामा नबिल दिगो बैंकिङ अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएकोे हो। नबिल बैंकले बित्थडचिर गाउँपालिका र आलिताल...
अब नबिल बैंकको मोबाइल बैंकिङबाट ‘खल्ती’ डिजिटल वालेट’ मा पैसा राख्न सकिने
काठमाण्डौ । नेपालको प्रचलित अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ‘खल्ती’ ले नबिल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ। जसअनुसार नबिल बैंकका ग्राहकलाई नबिल स्मार्टबैंक (मोबाइल बैंकिङ एप)मार्फत खल्तीमा पैसा लोड गर्न सम्भव बनाएको छ। यो साझेदारीसँगै नबिल बैंकका ग्राहकले अब खल्ती वालेटमा बिना झन्झट सीधै बैंकको नबिल स्मार्टबैंक एप खोलेर...
बम्पर लाभांश घोषणा गरेको नबिल बैंकद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेको नबिल बैंकले आफ्नो ३७ औँ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको दरबारमार्गस्थित नबिल सेन्टरमा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ९ः३०...
नबिल बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच मोबाइल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता
काठमाण्डौ । नबिल बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच मोबाइल भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले नबिल स्मार्टबैंक (मोबाइल बैंकिङ) सेवा प्रयोग गरी आफ्नो खल्ती वालेट लोड गर्न सक्नेछन्। त्यस्तैगरी नबिल बैंकका ग्राहकले अब खल्तीको प्लेटफर्ममा उपलब्ध कुनै पनि प्रकारको डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। खल्ती...
काठमाण्डौ। नबिल बैंकले दराज तथा आइमार्कसँग नबिल स्मार्टपोसको सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न गरेको छ। आधुनिक प्रविधिमा आधारित नबिल स्मार्टपोसद्वारा जुनसुकै बेला, जुनसुकै ठाउँबाट भुक्तानी दिन एवं स्वीकार गर्न सकिन्छ। नबिल स्मार्टपोसमार्फत बैंकले डिजिटल भुक्तानी सार्थक गर्ने सन्दर्भमा एउटा ठूलो कदम अगाडि बढाएको छ। यस...
नबिल बैंक र राष्ट्रिय युवा परिषदको सहकार्यमा जुम्लाको तिलामा उद्यमशिलता विकास र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौ। जुम्ला जिल्लाको तिला गाउँपालिकामा युवा उद्यमशिलता र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउदै समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको उद्यमशिलता विकास र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ६ दिने तालिम कार्यक्रम समापन भएको छ। यस कार्यक्रमका लागि नबिल बैंक, राष्ट्रिय युवा परिषद र तिला गाउँपालिकाबीच...
‘नबिल एसएसई फेलोसिप प्रोग्राम–२०२२’ मा आवेदन खुला, यस्ता छन् उद्देश्य र सर्त
काठमाण्डौ । नबिल बैंक लिमिटेडले ‘नबिल एसएसई फेलोसिप प्रोग्राम–२०२२’ का लागि आवेदन खुला गरेको छ। भित्रुभवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको सहकार्यमा नबिल बैंकले यस कार्यक्रमका लागि आवेदन खुला गरेको हो। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन, क्षमता विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कला...
काठमाण्डौ । नबिल बैंकले अधिकारिक रुपमा ‘नबिल डिजीबैंक’ पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ। नबिल डिजीबैंक पोर्टलमार्फत बैंकका ग्राहकहरुले एकद्वारमार्फन अनलाइन सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ग्राहकलाई सहज र सरल बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्न यस पोर्टलमार्फत बैंकले आफ्नो उत्पादन तथा सेवालाई स्वचालित बनाएको छ। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी...